Miyaan fududeyn karaa habka loo dhiso dib u qaabeynta dhabta ah ee isticmaalka warqada gadaasha dambe?
Weligaa ma yaabin sida loo helo sawirada tayada cusub ee sawirada? Waa nidaam dhisme xiriiriyaasha badan oo websaydarro ah oo aan la socon ama aaney ogeyn awooddeeda. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, hal sawir online ah ayaa noqon kara qiimo gaaraya kun oo xiriir. Diiradaynta dhismaha xiriirka qoraalka ku salaysan ayaa kaa dhigi kara mid ka mid ah istaraatijiyadaha dhismaha ee ugu muhiimsan - dhismaha muuqaalka sawirka. Waxaad soo gudbin kartaa macluumaad badan oo faa'iido leh iyada oo la adeegsanayo waxyaabaha muuqaalka sida sawirada, fiidiyowyada, sawirada, iyo wixii la mid ah.
Aan fiirino farsamooyin farsamo oo isku xiraya oo kaa caawin doona inaad abuurto xiriirro sawirro ah.
Sidee loo abuuraa sawirro soo jiidanaya gawaarida iyo gadaalooyinka?
Ugu horreyntii, waxaan jeclaan lahaa inaan sheego muhiimada hantida muuqaalka ah. Hantida muuqaalku waxay leedahay awood ka badan ereyada isku dhafan oo leh sawirro. Haddii si sax ah loo sameeyo, waxay bixiyaan hal-abuurnimo, cad, ama fikrado cusub oo ku saabsan mawduuca ugu jecel.
Si aad u soo jiidatid taraafikada ilahaaga shabakada, waxaad u baahan tahay inaad abuurto hantiyo muuqaal ah oo lagula kaco si aad ula qabsato slogans. Isticmaalayaasha waxay u muuqdaan inay wadaagaan qaar ka mid ah odhaahyada, kaftan, iyo xasaasiyad. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ahayn naqshadeeye, waxay noqon kartaa wax aad u dhib badan adiga inaad isku wada dhejisid. Si kastaba ha noqotee, marwalba way jirtaa. Waxaad isticmaali kartaa adeegyo raqiis ah sida Fiverr si aad u abuurto sawir sahlan. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli kartaa guluubyadooda kala duwan. Waxay ku heshiin doonaan inay abuuraan joornaal fudud oo jilicsan si aad u hesho qiimo macquul ah muddo gaaban. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahato wax aad u adag, taas oo u baahan hanaan xirfadeed, markaa waxaad u baahan tahay in aad shaqaaleysiiso nashqadda guriga.
Way adagtahay in la sheego in sawirkani uu soo jiidan doono gaadiid badan oo ku saabsan mawduucaaga ama maahan, laakiin hubaal waxay kaa caawinaysaa inaad fahanto fikradda ka dambeysa maqaalkan.
Sidee bey u shaqeysaa suuq-geynta?
Infographic waa hub xoog leh si loo helo dib u eegis. Webmasters waxay u adeegsadaan inay aqbalaan akhristayaasha oo ay u daacad u yihiin astaanta. Ganacsiyada yaryar ayaa badiyaaba geliya jaantusyada mawduucooda si ay u helaan xiriirro ka yimaada ciyaartoy fara badan oo suuqyada ah.
Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad sameyso cilmi-baaris Google si aad u hesho sawirro ku xirnaanta warshadaha. Isticmaal su'aalahan soo socda si aad u hesho waxyaabaha saxda ah - "erayga muhiimka ah" + "infographic"; "Qodobbada ugu muhiimsan ee lagu muujiyo sawirada"; "" Keywords infographics ". "Ka dibna fiiri natiijooyinka la helay oo raadso midka ugu fiican.
Haddii ganacsigaaga lagu dhejiyo meel qarsoodi ah, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah tusmada sawirada meesha aad ka heli karto wax kasta. Mid ka mid ah tusmooyinka ugu caansan waa muuqaal. Ly iyo Pinterest.
Isla markii aad heshay sawir ku habboon, waxaad u baahan doontaa inaad hesho mowduuc si fiican u shaqeeya niknigaaga. Isticmaalida heerarka kor ku xusan, waxaad awood u yeelan kartaa in xayeysi lagu sameeyo loona helo fikrad ah noocyada joornaalada ee caanka ah.
Marxaladda xigta, waxaad u baahan tahay inaad xogtaada wada hesho. Ujeedadaada ugu muhiimsani waa in aad ka heshid boggaaga ilaha badan ee shabakada internetka, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u ururiso macluumaadkaaga. Inkastoo xogtaadu tahay mid cajiib ah, uma muuqato in la helo posted on Forbes ama Harvard. Edu. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si sahlan loo xiriiri karaa ilaha webka ee lagu qadariyo warshadahaaga Source .